KwiFulfilPanda, ukuzalisekiswa kwemali ebuyiselweyo kuhlose ukwenza ukuhambisa kunye nokuqhubekeka nokufumana umvuzo kwimikhankaso exhaswa ngabantu kwi-Indiegogo, Kickstarter, njalo njalo. Iyakhawuleza, kulula, iyafikeleleka, kwaye ilungele.
Kwinkonzo yethu yokufezekisa ukubuyiselwa kwemali thina:
● Kukubonelela ngesilinganiso sexabiso lokuthumela ngenqanawe.
● Thumela iimpahla zakho kwindawo yokugcina izinto e-China okanye e-USA
● Pakisha kwaye uthumele iiodolo zakho. Unokukhetha nawuphi na umphathi ophethe i-DHL, i-FedEx, i-UPS, i-USPS, i-China EMS, kunye nokunye.
● Ukubonelela ngeenombolo zokulandelela, ukuze ukwazi ukulandelela iiodolo zakho.
● Ungaqhagamshelana nathi nanini na xa usidinga. Thetha nathi ngokukhululekileyo!
Iinkonzo zokufezekisa isiQinisekiso
Inkonzo yethu apha eFulfilPanda igxile kwimivuzo yomxhasi kunye nasekuzalisekiseni iiodolo zamaphulo axhaswe ngabantu I-Indiegogo, iKickstarter, kunye namanye amaqonga okubuyisa imali. Kunye neqela lethu elithembekileyo, siya kuphatha ulawulo lwempahla, ukupakisha, ukukhetha, kunye nokuthumela imveliso yakho exhaswa ngemali kwi-intanethi. Sinezixhobo eziza kuwuphatha umsebenzi ngokuqaqambileyo kwaye ngokugqwesileyo nokuba ubungakanani, ubungakanani, okanye ukumila kweemveliso ezifunekayo ukuze zilandwe, zipakishwe kwaye zithunyelwe kwangoko.
Ngaphaya koko, kwiinkonzo zethu zokubuyisa imali, sibeka inkonzo yethu ngokweenkcukacha ukubonelela ngokuchanekileyo into oyifunayo ukuze uzalisekise abaxhasi bakho kunye nemiyalelo ngempumelelo.
Ukwenza ukuhanjiswa kunye nokulungiswa kwembuyekezo yokuxhasa amaphulo axhaswe ngabantu kwi-Indiegogo, Kickstarter, njalo njalo ngokukhawuleza, ngokulula, ngokufikelelekayo, nangokufanelekileyo yinjongo yethu kule nkonzo.
Izisombululo zeNqanawa ezifikelelekayo
Ukuhanjiswa okungabizi kakhulu kunye nokuguquguqukayo okunika elona xabiso liphezulu lemali yakho sisithembiso sakho osinike sona. Sinoluhlu olubanzi lwezinto onokukhetha ukuzithumela ukusuka kwezona zicothayo kwaye zingabizi kakhulu ukuya kwezona zikhawulezayo nezithembakeleyo. Sikwabonelela ngezisombululo zokuhambisa ezizezakho,kuxhomekeke kwiimfuno zakho zebhajethi. Ke, ufumana ulawulo olupheleleyo kwixabiso lokuhambisa.
Nokuba uthumela iimveliso ezili-100 okanye iimveliso ezili-10,000, ungasoloko usebenzisa ithuba lokufumana izinto ezifikelelekayo nezinezaphulelo. Ngaphezulu kwayo yonke into, ukwanoxolo lwengqondo oluyimfuneko lokufumana umvuzo okanye iimveliso ziya kuhanjiswa ngexesha kwaye zikwimeko entle. Ukuhambisa kwethu ngokukhawuleza nangokuthembekileyo kuqinisekisiwe ukunika ukwaneliseka kwabathengi nge-100%.
Iinkonzo ezinokuthenjwa nezigqwesileyo
Ukongeza, siyaqonda ukuba inkqubo yokufezekisa umvuzo yenye yezona ndawo zixinzelelekileyo kuwo onke amaphulo okubuyisa imali. Iingcali zethu ezithembakeleyo kunye neqela lenkxaso elizinikeleyo liya kufumaneka ukunceda, ukuxhasa, kunye nokubonelela ngayo yonke into oyifunayo ukuze uqinisekise ukuba inkqubo yokufezekiswa kwemali yokubuyiselwa kwemali ijikeleza kakuhle kwaye ayinangxaki. Ungahlala uthembele kuthi ngeenkonzo zokufezekisa imali ezinokuthenjwa kunye nezigqwesileyo.
Sebenzisa ubuchule bethu kunye noBukho beHlabathi
Ukubonelela ngamava angenamagingxigingxi, amahle okukhankasela umkhankaso wokubuyiselwa kwemali kuqinisekisa ukuba banomdla wokukuxhasa kwezinye iiCommerce ezizayo okanye iinzame zokubuyisa imali. Icala lokulungiselela ukupakisha, ukukhetha, kunye nokuhambisa yenye yezona zinto zibalulekileyo kwinkqubo yomvuzo wokuxhasa.
Lungiselela ubungcali bethu kunye nobukho behlabathi jikelele ukuqinisekisa ukuba umvuzo wakho wokuxhasa kunye nokuzaliseka komyalelo kuguquka kwimpumelelo yethu. Ungasoloko usebenzisa eli ziko kufutshane namaziko akho okuvelisa eAsia okanye abo bakufutshane nabaxhasi bakho kunye nabathengi eUnited States.
Ngolwazi oluthe kratya malunga neenkonzo zethu zokufezekisa imali, nxibelelana nathi namhlanje kwiFulfilPanda. Sigxininisaukukhetha, ukupakisha, kunye nokuthumela imbuyekezo yomvuzo kunye neemveliso zobungakanani obahlukeneyo kunye neemilo. Iinkonzo zethu zikhawuleza, zinenkcukacha kwaye zithembeke kakhulu. Iqela lethu elizinikeleyo liya kufumaneka ukuze lithethe nawe kwaye linike iimpendulo ezifanelekileyo kwimibuzo nakwinkxalabo yakho. Xa kufikwa ekuphatheni umba wamalungiselelo ephulo lakho lokubuyisa imali, unokuhlala uthembele kuthi ngeenkonzo ezibalaseleyo nezingenakuthelekiswa nanto.